musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica Iye zvino Inotarisira 3 Mamirioni Ekufamba Vashanyi panosvika 2025
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Kurwisa • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Jamaica rwendo rwekushanya
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica, Hon. Edmund Bartlett, akaburitsa pachena kuti mukuyedza kusimudzira chikamu chekushanya, Jamaica ichave yakanangana nevashanyi mamirioni matatu echikepe panosvika 2025.
Pakutanga nhasi, akaita chiziviso ichi panguva yeJamaica Vacations Limited (JAMVAC) Executive Management uye Board Retreat, yakaitirwa kuRoyalton Blue Waters muTrelawny.
“Chinangwa chedu ndechekuona izvozvo Jamaika inowana vafambi vanosvika mamirioni matatu panosvika gore ra3. Takavaka zvivakwa, uye tiri kuzoita rimwe basa mumusika kuitira kuti tiite chinangwa chakakosha ichi," akadaro Bartlett.
"Simba iro Jamaica Tourist Board neJAMVAC richange richiisa mumusika richange riri rekuisa Jamaica, kwete senzvimbo yeCaribbean yesarudzo, asi nzvimbo inokwezva vanhu vekuEurope kunyanya, pamwe neAsia uye kuMiddle East,” akawedzera kudaro.
Bartlett akacherekedza kuti JAMVAC icharamba ichishanda pamwe nePort Authority yeJamaica, Jamaica Tourist Board (JTB), uye Tourism Product Development Company (TPDCo) kuzadzisa chinangwa ichi.
Nhau dzinogamuchirwa dzinouya pakati pemishumo yekuti cruise sub-sector, iyo yakavhurwazve muna Nyamavhuvhu, yave kuramba ichikura. The Planning Institute of Jamaica (PIOJ) yakataura kuti vafambi vengarava vanosvika zviuru zvisere nemazana matatu nemakumi manomwe nepfumbamwe kubva mungarava shanu dzemwedzi yaNyamavhuvhu naGunyana, zvichienzaniswa nenguva inoenderana ya8,379. Iyo PIOJ yakataurawo kuti Kukosha Kwechokwadi Kwakawedzerwa kuindasitiri yeHotera & Maresitorendi. inofungidzirwa kuti yakakura ne5% yenguva yaChikunguru kusvika Gunyana ya2020, kana ichienzaniswa nenguva yakafanana ye114.7. Kusvika kwevashanyi veStopover kwemwedzi yaChikunguru naNyamavhuvhu 2021 yakawedzera ne2020%, panguva imwe cheteyo ye2021.
JAMVAC iboka reveruzhinji reBazi reKushanya uye rakavambwa muna 1978. Rinotarisira nzvimbo dzeMinistry dzekutakura nendege nedzekese. Basa rayo nderekugadzira mamiriro ekuti nhamba dzevashanyi veJamaica dzikure nekukurumidza. Inovavarirawo kupa, kuchengetedza, uye kuwedzera simba rekufambisa nendege panzira mbiri dzakarongwa uye dzekuchata nekubatana nevatakuri varipo uye vangangove vatakuri vatsva kuti ive nechokwadi chekugona kwakaringana munzira yega yega. Uyezve, inoshambadzira yakananga kune vamiriri vechikepe, inokumbira kufona kuJamaican ports kubva kumigwagwa yekufamba nechikepe, uye inova nechokwadi chekuti zviitiko zvevafambi zvemugungwa zvinogara zviri pazvakanakira.
JAMVAC inotongwa neBoard of Directors, inotungamirwa naBertram Wright, uye Joy Roberts ndiye Executive Director parizvino.